N'ogbe mmiri High Voltage, Flame Retardant na Anti-Static Oil Delivery Hose Manufacturer and Supplier |JL
Voltaji dị elu nke mmiri, ọkụ na-egbochi ọkụ yana eriri nnyefe mmanụ mgbochi static
Ngwaahịa ahụ dị 40% dị ọkụ karịa eriri roba nke otu nkọwa na 30% dị ọkụ karịa eriri igwe.Ọ na-ebelata oke ọrụ nke ndị ọrụ, na-eme ka ọrụ dị mfe ma na-eme ka arụmọrụ ọrụ dịkwuo mma.
Ngwaahịa ahụ ka nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'okpuru obere okirikiri ntụgharị.N'akụkụ ya na-ehulata, ọkpọkọ na-anọgide na-agba gburugburu, ọ dịghịkwa mgbe a ga-enwe mpịachi, mgbidi dị n'ime na-adapụ na ọkpọkọ ahụ na-agbaji.
Polyurethane Marine Hose nwere ihe ndị a bụ isi
1. Ibu arọ.
2. Mgbanwe dị mma, na-ehulata n'efu, ọ bụghị nanị site na oghere ọrụ.
3. Ezigbo iguzogide nrụgide dị mma na nke na-adịghị mma.
Nrụgide ọrụ nwere ike iru 4.2mpa na nrụgide na-adịghị mma nwere ike iru 0.1MPa.
4. Ezigbo okpomọkụ na-eguzogide.
Okpomọkụ ọrụ bụ - 40℃ka +70 ℃, na nkesooks ahụ agaghị esi ike ma ọ bụ dị nro n'ihi mgbanwe nke ihu igwe ma ọ bụ okpomọkụ ọrụ.
5.Ọ nwere ezigbo mmanu mmanu na chemical corrosion eguzogide.
A na-eji ya ebufe mmanụ, mmanụ mmanụ, mmanụ nri, ihe mgbaze kemịkalụ na mmanụ mmanụ ala.
6. Ọ nwere ezigbo ọrụ mbupụ electrostatic.
Mgbe ị na-ebu mmanụ na mgbasa ozi na-ere ọkụ, a ga-emepụta ụfọdụ ọkụ eletrik kwụ ọtọ n'ihi nrụgide, ọnụego na-asọpụta, esemokwu na ihe ndị ọzọ.Ọ bụrụ na ebupụghị ya n'oge, ihe ga-esi na ya pụta agaghị echetụ n'echiche.A na-akwado ma jikọta ngwaahịa a site na ngwa agha ime n'ime na mpụta igwe igwe okpukpu abụọ, nke nwere ezigbo conductivity na iji nchekwa na ntụkwasị obi.
7. hydraulic shrinkage ịkpụzi isi, ezigbo akara.
Maka akụkụ njikọ nke ọkpọkọ ọkpọkọ na flange nke ngwaahịa a, ụlọ ọrụ anyị agbanweela usoro ndochi epoxy resin ọdịnala, wee nabata nnukwu akụrụngwa hydraulic iji mepụta isi ndakpọ n'otu oge.N'iji ya tụnyere ngwaahịa ndị yiri ya, arụ ọrụ mkpuchi dị mma, ọdịdị mara mma, na nkwonkwo agaghị ada n'ihi mmụba mberede nke nrụgide.
8. Mmiri mmiri siri ike na-eguzogide corrosion.
N'ihi gburugburu ojiji dị iche iche, ọ na-esiri ike ihe igwe n'ozuzu ya na-eguzogide corrosion nke mmiri oké osimiri na ikuku na gburugburu ebe ọrụ dị n'ụsọ oké osimiri ma ọ bụ n'ụsọ oké osimiri.Dị ka njirimara gburugburu ebe obibi a si dị, ụlọ ọrụ anyị emepụtala ụdị ọhụrụ nke mmiri mmiri na-eguzogide corrosion na-eguzogide mmiri, nke nwere ihe karịrị 10 ugboro na-eguzogide corrosion nke ụgbụ nkịtị (ọ gosipụtara site na nyocha na e jiri ya mee ihe n'oké osimiri ruo afọ 3 na-enweghị corrosion). ).Ọnụ ego ahụ dị ala karịa nke eriri igwe anaghị agba nchara, nke bụ akụ na ụba na nke bara uru.
Njirimara arụmọrụ nke polyester TPU hose
Ụdị polyester TPU eriri: ọ nwere elu igwe okpomọkụ, ezigbo eyi na-eguzogide, mmanụ na-eguzogide, mmanụ ụgbọala na ihe mgbaze na-eguzogide, elu okpomọkụ arụmọrụ, magburu onwe UV iguzogide na hydrolysis kwụsie ike.A na-atụ aro eriri usoro polyester TPU maka ngwa nwere ihe ndị a chọrọ;
Maka ngwa ndị nwere obere mgbanwe okpomọkụ, ezigbo nguzogide ihu igwe, nguzogide hydrolysis na ihe mgbochi nje bacteria chọrọ, a na-atụ aro polyether TPU usoro sooks;
Ụdị polycaprolactoneTPU eriri: ọ bụghị nanị na ọ nwere ike n'ibu na elu okpomọkụ arụmọrụ nke polyester ụdị TPU, ma na-enwe hydrolysis resistance na ala okpomọkụ na-eguzogide nke polyether ụdị TPU, na nwere ezi resilience, n'ihi ya, ọ dabara maka ngwa na pụrụ iche ọrụ.
Nke gara aga: China ODM Otu Oge Na-emepụta Polyurethane nwere akụkụ abụọ- -Hose Suppliers Exporter - Polyurethane High Pressure Drainage Hose Maka Iji Ngwuputa - JL
Osote: Nkọwa dị iche iche na njikọ ọkụ ọkụ nwere ike ịhazi ya